QM “11 ayaa dhimatay 50,000 na waa ay ku barakaceen colaadda Gaalkacyo” | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta QM “11 ayaa dhimatay 50,000 na waa ay ku barakaceen colaadda Gaalkacyo”
QM “11 ayaa dhimatay 50,000 na waa ay ku barakaceen colaadda Gaalkacyo”
QM ayaa sheegtay in 11 ruux ay geeriyoodeen 50,000 oo kalena ay ku barakaceen colaadda mudada halka isbuuca ah ka taagan magaalada Gaalkacyo ee gobalka Mudug.
War ka soo baxay xafiiska QM u qaabilsan isku-duburidka howlaha bani’aadanimo ee Soomaliya UNOCHA ayaa jimcaha maanta waxaa lagu sheegay in daggaalladii Gaalkacyo ay sababeen in dhibaato ba’an ay soo gaarto dadka shacabka ah ee Gaalkacyo ku nool.
“11 ayaa geeriyootay in ka badan 50 kun oo qofna waa ay ku barakaceen daggaalka dhex-maray ciidamo daacad u kala ah maamulada Puntland iyo Galmudug” ayaa lagu yiri warka OCHA ka soo baxay.
Hay’adda ayaa sheegtay inay ka welwel-santahay dhibaato kale oo soo gaarta dadka shacabka ah.
Dagggaalada Gaalkacyo waxaa ay murjiyeen xaladda bani’aadanimo ee ka jirtay gobalka, ayadoo jiilaal kuluul iyo marxalad adag ay wajahayaan dadka gobalka ku nool gaar ahaan dadka barakacsan ayay sheegtay hay’adda.
QM ayaa dhinacyada ku dagaallamaya magaalada Gaalkacyo ugu baaqday inay xabadda joojiyaan.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowaan ka dhawaajisay in xalka magaalada Gaalkacyo ay u aragto in ciidamo dhex-dhexaad ah oo ka socda Dowladda Dhexe in la geeyo magaalada, taasi oo ay diideen maamulka Puntland.
Waxaa socda dadaallo uu wado Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya labadan maamul, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore dagaal noocan oo kale ah uu dhexmaray.
Previous articleWafdi QM ah oo ku wajahan Kismaayo.
Next articleClashes in Somalia kill 11, displace 50,000: U.N.